Hungwe - Wikipedia
Hungwe (African Fish Eagle) ishiri huru inowanikwa muAfrica kuchamhembe kweSahara. Shiri iyi inogara munzvimbo dzine mvura yakawanda pane nzizi huru, madhamu kana nyanza; apa dzinenge dzichitevera pane chokudya chakawanda. Hungwe ndiwo shiri iri pamureza weZimbabwe, zvakare ndiyo iri pamureza weZambia. Hungwe yainzi na Vutata ishiri ine mikosh sikisitini, asi wechi seventeen ndewe jet propellation.
1 Chimiro cheHungwe
Hungwe ishiri huru; nzvari inokura kuita huremu 3.2-3.6kg, mukono uchiita 2-2.5kg pahuremu. Mukono unotambanuka mapapiro achipimwa 2m, iyo nzvari ichiita mapapiro anotambanuka 2.4m. Muviri wayo unokura kusvika 63-75cm dzokureba.
Muviri wehungwe yakura une ruvara rwe brown, namapapiro eshure matema ane simba samare. Musoro nemuswe wayo muchenachena, icho chiso chiri che yellow chsina makushe. Kudya kwehungwe ndizo hove dzainonyukura mumvura asi inodyawo dzimwe shiri dzinotambra pamvura. Anoinzwa kuchema kwayo hungwe anotorangaridzwa kumusha kuAfrica.
Hungwe inowanikwa kune mitumbi yemvura zhinji kune nyanza, madziva, nenzizi; zvakare inowanikwawo pedyo negungwa panosvika nzizi dzichidira mugungwa. Shiri iyi mumusha mayo muAfrica mainowanikwa kuchamhembe kwegwenga reSahara. Nzvimbo dzinoonekwa hungwe kunyanya dzinosanganisira: rwizi Orange kuSouth Africa neNamibia; Okavango kuBotswana; neNyanza yeMalawi. Shiri iyi inonzi inotambirawo kuNyanza Victoria nedzimwe nzvimbo dzine nyanza kuCentral Africa.
Mikono inotanda nzvari munguva yechirimo apo mvura inenge yakaderera. Zvinofungirwa kuti hungwe inotanda hadzi imwe kwehupenyu hwayo hwose. Mukono nehadzi zvinovaka matendere maviri kana kudarika dzichizopota dzichidzokera kumatendere aya. Nokuti dendere rimwe rinokwanisa kushandiswa kakawanda richivakurudzwa nguva dzose, dendere rinogumisidza rakura zvotambarara kuita 2m uye 1.2m pahudzamu . Matendere mazhinji anovakwa mumiti mikuru achivakwa netsotso dzemiti.
Nzvari inokandira zai rimwe kusvika kumatatu; mazai aya machena ane mavara matsvuku. Nzvari ndiyo inorinda mazai asi mukono unorindawo kana nzvari yaenda kunovhima. Mazai anorindirwa mazuva 42-45 asati achechenya. Mazai anokwanisa kuchechenya pamazuva akataramukana, kana zvakadai nhiyo huru ine musambo wekuuraya dzimwe ndiki. Nhiyo dzehungwe dzinogara mudendere kwemazuva 70-75, kwapera mavhiki manomwe (8) nhioy idzi dzinenge dzozvitsvakira chikafu dzochitanga kubuda mudendere.
Hungwe ndiyo shiri iri pa"Court of Arms" dzenyika dzinoti, Namibia, Zambia neSouth Sudan. Ndiwo zvakare iri pamureza weZimbabwe nepamureza weZambia.
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Hungwe&oldid=41471"
Last edited on 24 Gunyana 2015, at 05:14
This page was last edited on 24 Gunyana 2015, at 05:14.